Yakaunzwa Tor 0.4.5 uye isingazivikanwe yekuzivisa system yeGitLab | Linux Vakapindwa muropa
Mumazuva ekupedzisira Tor vagadziri vakaburitsa maviri akakosha nhau, imwe yacho iri kuburitswa kweshanduro nyowani yaTor 0.4.5.6 (yaishandiswa kuronga basa reasina kuzivikanwa Tor network).
Thor 0.4.5.6 inotaridzirwa yekutanga vhezheni yebazi 0.4.5, iyo yakashanduka pamusoro pemwedzi mishanu yapfuura. Bazi 0.4.5 richachengetwa sechikamu chenguva dzose yekuchengetedza kutenderera; zvinyorwa zvichamiswa mwedzi mipfumbamwe kana mwedzi mitatu mushure mekunge bazi re9.x raburitswa.
Yakareba rutsigiro kutenderera (LTS) yakapihwa iyo 0.3.5 bazi, iyo yekuvandudza iyo ichaburitswa kusvika Kukadzi 1, 2022. Rutsigiro rwe0.4.0.x, 0.2.9.x, 0.4.2 matavi. x uye 0.4.3 yamiswa. Bazi 0.4.1.x richamiswa musi waMay 20 uye bazi 0.4.4 richamiswa muna Chikumi 2021.
Pakati pezvinhu zvikuru zvitsva kubva kuTor 0.4.5 tinogona kuwana izvo iko kugona kwekuvaka Tor muchimiro cheyakaganhurirwa yakabatana raibhurari kwakaitwa kuti isimbiswe mumashandisirwo.
kunze kwaizvozvo kuonekwa kwe IPv6 inoenderana relays kwakagadziriswa zvakanyanya, sezvo mu torrc, IPv6 kero dzinobvumidzwa mune yeKero sarudzo. Iwo anodzoreredzwa anopihwa otomatiki anosunga kune IPv6 yezviteshi zvakatsanangurwa kuburikidza neORPort, kunze kweavo vakanyatsoratidzwa ne IPv4Only mureza.
ORPort kuwanikwa ne IPv6 ikozvino kwakateedzana zvakasiyana nekutumira ORPort ine IPv4. Relays ne IPv6 rutsigiro, kana yakabatana neimwe relay, inosanganisira IPv4 uye IPv6 kero mune sero runyorwa uye nasarudzika sarudza iyo inoshandiswa yekubatanidza.
Uye zvakare, kune vanoshanda, rayleighs yakurudzira iyo "MetricsPort" mashandiro ekutarisa saiti mashandiro. Kuwanika kwehuwandu hwekushanda kwenzvimbo kunopihwa kuburikidza neiyo HTTP interface. Prometheus kuburitsa parizvino kunotsigirwa.
Yakawedzerwa tsigiro yeLTTng yekutevera sisitimu uye mushandisi nzvimbo yekutevera mune USDT modhi .
Uye nyaya dzekuita dzakagadziriswa neanodzosera anomhanya papuratifomu yeWindows.
Anon-Tiketi isingazivikanwe yekuzivisa system
Dzimwe nhau dzakaburitswa nevashandi veTor ndedzekuti vakagadzira Anon-Tiketi, ipulagiji yekubatana kwekuvandudza chikuva GitLab iyo inokutendera kuti uendese uye nekukurukura nyaya zvisina kuzivikanwa pasina kusaina account.
Anon-Ticket yakatangwa sevhisi mune bvunzo modhi iyo inobvumidza mameseji nezve matambudziko muTor repositories, asi iyo plugin haina kubatana neTor uye inogona kushandiswa mune mamwe mapurojekiti.
Kazhinji vashandisi vanoda kuzivisa vanogadzira nezve dambudziko vanosiya vavariro, vachifanira kuzadza mafomu kuwedzera kunyoreswa, chinja rako pachako data kana kumirira yekusimbiswa.
Anon-Tiketi inokutendera iwe kuendesa nekunyoreswa, izvo zvisina basa kana uchitumira ziviso-yenguva-imwe, kubvisa kumirira kusimbiswa kweakaundi kubva kumutungamiriri, nekuchengeta rako pachako data uye email zvakavanzika.
Anon-Tiketi inobvumira kwete chete kutumira, asiwo kuteedzera chimiro chematikiti akapedzwa uye shambadza kujekeswa, iko iko mushandisi anogamuchira otomatiki anogadzirwa echiratidzo uye chinongedzo kune peji rinogona kuiswa bhukumaki kudzora tikiti ravo.
Iyo interface inopawo mabasa ekuona aripo mapurojekiti uye tsvaga matikiti ane chekuita nechirongwa chakasarudzwa. Iyo post moderation mechanism inoshandiswa kudzivirira spam uye kushungurudzwa.
Moderators vane zvishandiso zvinochinja kuita batch kubvumidza kana kuramba zvakamirira zvakatumirwa, pamwe nekwanisi yekugadzirisa uye nekusiya makomenti ayo anongoonekwa kune vamwe vatungamiriri.
Zvirongwa zveramangwana ivo vanotaura nezve kugadzirwa kweonion sevhisi, vachiwedzera imwe nzira dzekuchengetedza, zvakaita sekudzikisira kusimba kwekutumira mameseji, uye kushandisa kugona kushandura asingazivikanwe kutora chinhano kuita imwe yenguva dzose (semuenzaniso, kana mushandisi afunga kubatanidza zvizere kubudiriro, akanyoresa GitLab account uye aida kuendesa yavo yekare isingazivikanwe hurukuro kwariri ).
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yakaunzwa Tor 0.4.5 uye isingazivikanwe yekuzivisa system yeGitLab
OpenMandriva Lx 4.2 inouya nechiteshi cheARM, Linux 5.10.14 uye nezvimwe